Premiumzụta Premium CBD ntụ ntụ & mmanụ ụlọ ọrụ mmepụta iwu
CBD enwetawo traction n'oge na -adịbeghị anya, ọkachasị n'etiti ndị na -eto eto. Ihe dị ka pasent 20 nke ndị nọ n'agbata afọ 18 na afọ 29 na -eji ụdị CBD ụfọdụ, ebe naanị pasent 8 nke ndị gafere afọ 65 na -eji CBD. Ndị meworo okenye amalitela ịchụkwudo ndị na-eto eto na ihe dị ka pasent 30 nke ọgbọ a na-eri na oriri CBD, ma ọ bụ n'ụdị mmanụ, ntụ ma ọ bụ n'ụdị ịgba.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-azọrọ na ha na-eji ngwaahịa a maka ike ya belata ihe mgbu ma belata ihe mgbaàmà nke nchekasị na nsogbu ọnọdụ mmụọ ndị ọzọ. Ojiji nke CBD rịakwara elu mgbe ọnọdụ iwu wii wii gbanwere, nke na -abụghị otu na CBD. Agbanyeghị, nkwado iwu nke wii wii nyere aka wepu ihere na ojiji ya na ojiji nke cannabinoids dị na osisi n'onwe ya.
Gịnị bụ CBD (Cannabidiol)?
Cannabidiol ma ọ bụ CBD bụ phytocannabinoid nke sitere na osisi cannabis ma bụrụ otu n'ime ihe mejupụtara osisi wii wii, yana nwa nwanne nna ya, hemp nke na-enye ha mmetụta na-ebelata mgbu. Ọ dị mkpa iburu n'uche na a na -amịpụta cannabidiol site na osisi hemp, nke bụ nke ụdị osisi cannabis mana ọ bụghị ihe akpọrọ wii wii. Dịka esi ewepụta ya na osisi hemp, ọ nweghị ihe ọ bụla na -emetụta mmụọ nke pụtara na ọ nweghị ike ime ka ndị mmadụ 'dị elu'.
Osisi Cannabis sativa, akọwapụtara nke ọma, ahịhịa wii wii nwere ikike ime ka ndị mmadụ nwee mmetụta dị elu site na mmetụta nke Delta-9-tetrahydrocannabinol ma ọ bụ THC, phytocannabinoid ọzọ sitere na osisi cannabis. Marijuana nwere mkpokọta THC dị elu karịa osisi cannabis ndị ọzọ dị ka hemp nke mere na ọ nwere ihe kacha akpa agwa n'etiti osisi ndị ọzọ niile. CBD sitere na osisi hemp nke bara ụba na CBD mana enwere THC pere mpe, na -eme ya nhọrọ zuru oke maka ndị ga -achọ inweta uru nke osisi Cannabis sativa na -enweghị mmetụta mmụọ.
Mmetụta nke CBD na THC bụ otu na tiori na ha abụọ na -emetụta kemịkalụ dị iche iche ma ọ bụ neurotransmitters na ụbụrụ mana ihe ọ bụla cannabinoid na -emetụta kemịkal dị iche iche ma nwee mmetụta dị iche na ha, yabụ na -arụpụta nsonaazụ dị iche iche.
Achọpụtara Cannabidiol na 1940 dị ka phytocannabinoid na-abụghị psychoactive na osisi cannabis mana ọ bụ ruo na 2018 ka USA wepụrụ ya, yana osisi nne na nna ya, hemp, na Ndepụta Ihe Njikwa. Agbanyeghị, ọ ka bụ iwu na -akwadoghị ka ndị mmadụ jiri ntụ ntụ cannabidiol, mmanụ CBD, ma ọ bụ ngwaahịa CBD ndị ọzọ n'ụdị dị ọcha ma ọ bụ usoro ọ bụla dị ka ọgwụgwọ nwere ike ịbụ ma ọ bụ ihe mgbakwunye na mgbakwunye nri.
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ FDA na United States of America kwadoro ọgwụ CBD maka ọgwụgwọ ọrịa akwụkwụ na ọdịdọ. A na -atụ aro ya maka okwu ahụike ndị ọzọ agbanyeghị, ọ ka ga -enweta nkwado FDA na mba ndị isi ahụike ndị ọzọ tupu ọ bụrụ ọkọlọtọ nke nlekọta.
Kedu ka CBD si arụ ọrụ na ahụ?
N'ezie, ndị ọkachamara na-atụle isiokwu nke "kedu ka CBD si arụ ọrụ n'ahụ mmadụ" ruo ọtụtụ afọ. Ọ dị ka a hụla arụmụka ezi uche dị na ya. Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na CBD na -eme ihe na -apụtaghị ìhè na sistemụ endocannabinoid iji rite uru ya. Tupu anyị aghọta ka CBD si eme ahụ anyị, anyị ga -ebu ụzọ ghọta ihe bụ sistemụ endocannabinoid yana kedu ka ọ dị na ahụ anyị?
Kedu ihe bụ usoro endocannabinoid (ECS)?
"Cannabinoid" sitere na "cannabis," na "endo" dị mkpụmkpụ maka "endogenous," nke pụtara na ọ na -emepụta ya n'ime ahụ gị. Yabụ "endocannabinoid" pụtara naanị ihe cannabis dị ka ihe na-emekarị n'ime anyị.
ECS n'onwe ya nwere akụkụ atọ:
Usoro endocannabinoid nke anụ ahụ na -arụ ọrụ nke ọma
Ndị na -anabata ya (CB1, CB2) na sistemụ ụjọ na gburugburu ahụ gị nke endocannabinoids na cannabinoids nwere njikọ. (Ndị na-anabata CB1 nọ n'ahụ niile, ọkachasị n'ụbụrụ. Ha na-ahazi mmegharị, mgbu, mmetụta, ọnọdụ, echiche, agụụ, agụụ, ncheta na ọrụ ndị ọzọ . Ndị na -anabata CB2 na -adịkarị na sistemụ ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ha na -emetụta mbufụt na mgbu)
Enzymes nwere mmetụta pụrụ iche na -enyere aka gbarie endocannabinoids na cannabinoids
Ọ bụghị naanị na ECS bụ akụkụ nke ahụ anyị, mana ọ bụkwa ihe dị mkpa. Endocannabinoid sistemụ (ECS) na-arụ ọrụ na-atọ ụtọ ma dịgasị iche iche n'ime ahụ. Na nke kachasị, sistemụ endocannabinoid bụ nnukwu netwọkụ nke ndị na -anabata cannabinoid nke na -agbasa n'ahụ. Usoro endocannabinoid nke mmadụ na -ewepụta cannabinoids nke na -emekọrịta ihe na ndị na -anabata ya n'ime anụ ahụ niile. I nwekwara ike were phyto-cannabinoids (CBD) na mgbakwunye na ogige ndị ahụ gị na-emepụta iji nyere aka kwalite usoro a. Ọrụ nke usoro endocannabinoid bụ iweta nguzozi na anụ ahụ anyị, gụnyere obi, nri, endocrine, mgbochi, ụjọ na sistem. Na nkenke, ọ na -arụ ọrụ ime ka ị nọpụ iche. Nnọpụiche pụtara ihe dị iche iche n'akụkụ dị iche iche nke ahụ gị, nke nwere ike bụrụ otu n'ime ihe kacha mma gbasara ogige - ọ nwere ike inwe mmetụta dị iche na ndị nnabata dị iche iche na ahụ gị.
CBD, n'ụzọ dị iche, anaghị emetụta mmụọ, ọ gaghị achịkwa gị ma mee ka ị rie ahụ mgbe ị jiri ngwaahịa CBD ma ọ bụ CBD. CBD anaghị agbanwe agbanwe uche mmadụ mgbe ha jiri ya. Agbanyeghị, ọ nwere ike mepụta mgbanwe dị ukwuu na ahụ, ọ na-egosi ụfọdụ uru ahụike dị mkpa.
Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere n'otu oge na CBD nwere mmasị na ndị na -anabata CB2, mana ọmụmụ ọhụrụ egosila na CBD anaghị etinye aka na ma ọ bụ ndị na -anabata ya. Kama nke ahụ, ọ kwenyere na CBD na-emetụta usoro endocannabinoid n'ụzọ na-enweghị isi. Mmetụta na -adịghị agbanwe agbanwe nke CBD na sistemụ endocannabinoid Mgbe mmadụ na -ewere CBD, ogige ahụ na -abanye na sistemụ gị yana na endocannabinoid system (ECS). arụrụ arụ.
CBD na -egbochi fatty acid amide hydrolase (FAAH), nke na -akụri anandamide ma na -eme ka ọ daa mbà. CBD na -ebelata FAAH, nke na -eduga n'ịba ụba nke anandamide. A na-ewere Anandamide dị ka "bliss molecule" ma na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọgbọ nke obi ụtọ na mkpali. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke anandamide nwere ike inwe mmetụta dị mma na usoro endocannabinoid.
CBD na -emetụtakwa protein na -ejikọ abụba (FABP). Ndị na -edozi FABP na -ejikọ na anandamide ma bufee enzyme na mpụga synapse ka FAAH mebie wee metabolized. CBD na -emetụta usoro njem FABP ka obere anandamide bụrụ metabolized, ọzọ na -ebute oke anandamide.
N'ikpeazụ, CBD na-ejikọ onwe ya na ndị na-anabata G-protein a maara dị ka TRPV-1. Ndị na-anabata TRVP-1 na-etinye aka n'ịhazi ihe mgbu, ahụ ọkụ, na mbufụt. Ọ bụ site na njikọ a ka ndị sayensị kwenyere na CBD na -enyere aka na mbufụt na ibelata mgbu.
Na otu okwu, sistemụ endocannabinoid na -enyere aka idobe ahụ na homeostasis. Mgbe ingested, Cannabidiol nwere ike nyere aka kwalite ike ahụ anyị ịrụ ọrụ nke ọma. CBD na -emekọrịta na cannabinoid, dopamine, opioid na serotonin ndị na -anabata ahụ anyị, wee bulie ọtụtụ ọrụ ahụ anyị.
Uru Ahụ Ike nke CBD
Enwere ike ị nweta ama na ama CBD na uru dị iche iche ọ nwere n'ahụ mmadụ, nke ọtụtụ n'ime ha abụghị naanị nyocha nke ọma kamakwa n'ihi ọmụmụ ihe ndị ahụ, nke ihe akaebe sayensị kwadoro. Tupu nkwado iwu na ojiji nke ogige ahụ, emere ọtụtụ ụdị nyocha ọ bụghị naanị ịmụ uru na uru nke CBD kamakwa iji nyochaa ma nyochaa nchekwa na nsí nwere ike ime na ogige ahụ.
A kpọtụrụ ọtụtụ uru nke CBD n'okpuru, yana ọmụmụ dị iche iche gosipụtara uru ndị ahụ.
Management Njikwa mgbu na enyemaka
Ọtụtụ ndị mmadụ na -achọ iji CBD maka abamuru a. Enwere ndekọ nke ejiri wii wii mee ihe mgbu, na -alaghachi azụ na 2900 BC. Osisi Cannabis nwere ike rụọ ọrụ dị ka ihe mgbu ma belata ụdị mgbu dị iche iche n'ihi ihe ha mere na onye na -anabata cannabinoid n'ime ahụ.
Ahụ mmadụ nwere sistemụ endocannabinoid ma ọ bụ ECS iji nyere aka n'ọtụtụ ọrụ dị mkpa dị ka ụra, agụụ, na nzaghachi ọrịa. ECS bụ ọrụ maka mwepụta nke cannabinoids endogenous nke na -eme ihe nnabata cannabinoid ma belata ihe mgbu, kwalite mmeghachi omume mgbochi, kpalite agụụ na okirikiri ụra. CBD na THC bụ ma cannabinoids na mgbe ejiri ọnụ ma ọ bụ n'elu were na -emekọrịta ma na -ejikọ ndị nabatara cannabinoid. Ebe ọ bụ na cannabinoids ndị a dị oke egwu yiri nke cannabinoids, ha nwere ike rụpụta otu nsonaazụ dị ka nke na -enweghị atụ, n'agbanyeghị na nsonaazụ ha nwere ike bụrụ nke ekwubigara ókè.
N’afọ 2018, ndị nyocha mere nyocha meta nke akwụkwọ niile ebipụtara ruo 2017 gbasara uru nke cannabidiol na-eji ndị ọrịa nwere mgbu neuropathic n’ihi ọrịa ọjọọ. Nnyocha iri na ise n'ime ọmụmụ iri na asatọ nke sonyere na nyocha meta a chọpụtara na ọtụtụ ndị ọrịa nwere ahụ mgbu mgbe ha jikọtara 27mg THC na 25 mg CBD.
Ọzọkwa, nyocha niile chọpụtara na mmetụta kacha njọ na nchikota a bụ ọgbụgbọ, ọnụ kpọrọ nkụ, na ọgbụgbọ. Mmetụta ndị a adịghị na onye ọrịa ọ bụla na ndị ahụ metụtara enweghị mmeghachi omume zuru oke. Nke a mere ka ndị nyocha kwubie na iji THC na CBD, nwere ike ịgwọ mgbu neuropathic na-anabata ya nke ọma yana obere ihe egwu nke mmetụta ọjọọ.
Enwere ọtụtụ ụdị nyocha dị iche iche emere iji kwado iji CBD mee ihe mgbu. Otu nyocha dị otú ahụ lekwasịrị anya n'iji CBD eme ihe maka immunomodulatory na mgbochi mkpali ya. Emere ọmụmụ Italiantali n'ụdị anụmanụ na ndị nyocha n'ọmụmụ ihe a nwara imezi ihe mgbu na -adịghị ala ala na oke site na iji CBD ọnụ. Ha chọpụtara na mgbe enyere 20 mg/n'arọ nke CBD oke nwere mgbu mgbu na -adịghị ala ala, oke ahụ gosipụtara mbelata dị ukwuu na mgbu ahụ. N'otu aka ahụ, ha nyochakwara nsonaazụ CBD na mgbu neuropathic na oke nwere mmerụ akwara sciatic na agbanyeghị na ọ nwere ike belata ihe mgbu, achọpụtara na CBD kacha baa uru na steeti mgbu na -adịghị ala ala.
Ọtụtụ mmadụ na -ewere mmanụ CBD ma ọ bụ sprays ma ọ bụ ọgwụ maka mgbu na -adịghị ala ala, na nke ahụ bụ otu n'ime isi ihe kpatara ewu ewu CBD na wii wii. Ọ bụkwa uru a, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, dugara n'iji CBD na wii wii eme ihe ebe niile na -eduga n'iwu nke ogige abụọ na iwepụ CBD na Ndepụta Ihe Njikwa.
♦ Ọgwụgwọ Akwụkwụ na ihe ọdịdọ ndị ọzọ
A na -ejikọkarị ihe ọdịdọ na akwụkwụ mana ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ nwere ike ibute ọdịdọ dịka Dravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome, na ndị ọzọ. Achọpụtala ụdị dị ọcha nke ngwaahịa CBD ka ọ nwee mmetụta ịrịa ọrịa akwụkwụ ma ọ bụ mgbochi ọdịdọ mana ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya enwere ezigbo ihe sayensị na-akwado echiche a.
Na mbido, enwere ọtụtụ arụmụka gbasara iji CBD ọkachasị n'ịgwọ ọrịa akwụkwụ na nsogbu ọdịdọ ndị ọzọ. Nke a na-abụkarị n'ihi na n'agbanyeghị na CBD bụ ihe na-egbochi mmadụ, n'ọnọdụ ụfọdụ siri ike, ọ nwere ike rụọ ọrụ dị ka pro-convulsant. Agbanyeghị, mgbe emechara ọnwụnwa okpukpu abụọ dị iche iche, a nwalere ọnwụnwa ụlọ ọgwụ, achọpụtara na nke ahụ abụghị ya. Achọpụtara CBD na THC na -abụkarị ndị na -egbochi nje na ọdịdị.
N'ihi ọtụtụ ọmụmụ, achọpụtara na ntụ ntụ CBD dị ọcha na mmanụ hemp CBD, n'etiti ngwaahịa CBD ndị ọzọ, na-elekọta ma na-agwọ ọdịdọ nke ọrịa akwụkwụ, Dravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome, na Lennox-Gastaut Syndrome na-ebute. Site na nchọpụta a, GW Pharmaceuticals mepụtara ọgwụ nwere mkpokọta CBD dị ọcha aha ya bụ Epidiolex nke nwetala nkwado FDA ka e jiri ya dị ka ọgwụ mgbochi ọdịdọ.
Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na amabeghị ma ọ bụrụ na ngwaahịa CBD zụtara n'aka ndị nrụpụta CBD dị iche iche na -arụ ọrụ dị ka Epidiolex n'ịchịkwa akara nke nsogbu ọdịdọ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị ndị nrụpụta ntụ ntụ CBD niile na ndị na -eweta ntụ ntụ CBD na -enye ezigbo ntụ ntụ na ngwaahịa CBD kama ọ bụ ngwaahịa merụrụ nke na -adịchaghị nke ọma, yabụ, ọ bụghị dị irè. Ọ dị oke mkpa naanị ịzụrụ n'aka ndị na-ere ahịa ekwenyero na-ere ngwaahịa CBD dị oke mma.
Ndị ọrụ nyocha na-agba mbọ ugbu a inwale ojiji nke CBD na THC ọnụ ma ọ bụ iji CBD naanị na ijikwa na ịgwọ ọdịdọ na-eguzogide ọgwụ, ebe ọ bụ na ha na-etinye nnukwu ihe egwu na ndụ ndị ọrịa ma na-ebutekarị mbelata ịdị mma nke ndụ.
Nye CBD ntụ ntụ & mmanụ ugbu a!
Belata Nchekasị na ịda mbà n'obi
E gosipụtara ojiji nke cannabidiol na-enwe mmetụta nchekasị na mgbochi nkụda mmụọ n'ọtụtụ ụdị anụmanụ. N'ime ọmụmụ Brazil emere na ụmụ oke, achọpụtara na CBD nwere otu mmetụta dị ka imipramine, onye ama ama na-egbochi ịda mbà n'obi na hippocampus nke ụmụ oke dara mbà. Emere ọmụmụ ihe a iji nyochaa mmetụta nke cannabidiol na ịda mbà n'obi yana inwale etu CBD ga -esi wepụta nsonaazụ ndị ahụ.
Ndị nyocha ahụ chọpụtara na CBD mere ndị na-anabata serotonin, ọkachasị ndị na-anabata 5HT-1A iji mepụta mmetụta mgbochi mkpali n'ozuzu ya. Achọpụtakwara na, ka CBD wee dị irè, ịgbalite BDNF ma ọ bụ ihe kpatara neurotrophic sitere na Brain dị mkpa.
Agbanyeghị, ọmụmụ a lekwasịrị anya na mmetụta nke CBD na ụdị anụmanụ na otu nsonaazụ adịghịkwa mkpa imepụta na mmadụ. Ọ bụ ya mere ejiri mee ọmụmụ ihe na 57 ahụike, ụmụ nwoke toro eto iji nyochaa ma ọ bụrụ na CBD nwekwara nchekasị na mgbochi ịda mbà n'obi na mmadụ. N'ime nnwale ụlọ ọgwụ Brazil abụọ a na-ahụ anya, a na-enyocha ojiji CBD megide placebo iji nyochaa nsonaazụ ya wee chọpụta na mmetụta CBD na ụmụ anụmanụ na-emetụtakwa mmadụ. Nke a pụtara na iji CBD nwere ikike ibelata nchekasị na ịda mba n'ime mmadụ.
A kwenyere na mmanụ na ntụ ọka Cannabidiol na -arụ nnukwu ọrụ na ọgwụgwọ na njikwa nchegbu ụmụaka na nsogbu PTSD, dị ka akụkọ ikpe nke ndị dọkịta bipụtara na Mahadum Colorado bipụtara.
Jikwaa Mgbaàmà ndị metụtara ọrịa cancer
Ọrịa kansa na ịgwọ ọrịa kansa na-ebutekarị mgbaàmà na-abụghị nke akọwapụtara dị ka ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, na mgbu. Mgbaàmà ndị a siri ike ijikwa ọkachasị ebe ha na -emegharị n'ọrịa cancer ọ bụla. Agbanyeghị, ọmụmụ emere n'oge na-adịbeghị anya na-egosi na CBD nwere ike jikwaa mgbaàmà ma ọ bụ ngwakọta nke CBD na THC.
Nnyocha e mere na United Kingdom na ndị ọrịa 177 ka emepụtara iji nyochaa nchekwa na ịdị irè nke CBD na THC nchikota dị ka ndị na-adịghị ahụkebe analgesics na ndị ọrịa na-arịa mgbu metụtara ọrịa kansa. Nsonaazụ izizi nke ọmụmụ ahụ gosipụtara mmetụta na -ekwe nkwa dị ka ọtụtụ ndị ọrịa na -ewere ngwakọta CBD na THC kọrọ ntakịrị mbelata mgbu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa otu placebo. Nke a na -egosi ịdị irè nke ma cannabinoids n'ịgwọ na ijikwa mgbu na ndị ọrịa kansa.
Ọzọkwa, ndị nyocha n'otu ọmụmụ ahụ kpebisiri ike ịchọta nnabata nke ọgwụgwọ ọhụrụ a nwere ike ị nweta ndị ọrịa kansa n'ihi na ọtụtụ ọgwụgwọ ọrịa kansa nwere ọtụtụ nsonaazụ ya na ha. Achọpụtara na ndị ọrịa na-anabata CBD na THC nke ọma yana nchikota anaghị emepụta mmetụta ọjọọ ọ bụla ekwesịrị ịkọ.
Chemotherapy bụ ọgwụgwọ a na -ahụkarị maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọrịa kansa niile mana ahụ mmadụ anaghị anabata ya nke ọma ma nwee ike ibute oke ahụike. Otu n'ime mmetụta ndị bụ isi dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrịa niile na-anara ọgwụ chemotherapy bụ ọgbụgbọ na-akpata ọgbụgbọ na ọgbụgbọ ma ọ bụ CINV. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọgwụ antiemetic dị, ụfọdụ n'ime ha maka CINV, anaghị adịcha mma. Agbanyeghị, nyocha emere na Barcelona chọpụtara na oriri CBD nwere ike inye aka belata ndị ọrịa na -arịa CINV nwere arụmọrụ dị elu karịa ọgwụ antiemetic emebere maka CINV.
CBD nwere ọtụtụ uru megide ọrịa neuropsychiatric ebe ọ na -elekwasị anya ndị na -anabata neurotransmitter dị iche iche na ndị na -anabata cannabinoid iji mepụta nsonaazụ ọma ndị a. FDA na ndị ọrụ ahụike gburugburu ụwa nabatara Epidiolex ọgwụ CBD, maka ọgwụgwọ ọdịdọ n'ihi Akwụkwụ na nsogbu ọdịdọ.
N'inye uru ndị a, emeela ọtụtụ ụdị nyocha iji mụọ nsonaazụ CBD na nsogbu akwara ozi ndị ọzọ, dịka Alzheimer na Multi Sclerosis.
Ọmụmụ ihe emere na Germany mụtara nsonaazụ Sativex, CBD oro-mucosal na-efesa na spasticity akwara ahụ hụrụ na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis. Ndị ọrịa a tara ahụhụ akwara na-eguzogide ọgwụ na ịgba CBD, n'ime ndị ọrịa a, ejiri ya dịka ọgwụgwọ mgbakwunye na ọgwụgwọ ndị dị adị.
Achọpụtara na ọtụtụ ndị ọrịa sclerosis nabatara Sativex na enweghị mmeghachi omume ọjọọ n'ihi oriri Sativex. Ọzọkwa, ndị ọrụ Sativex kọrọ mbelata dị ukwuu na spasms akwara na mgbu, nke mere ka ndị nyocha ahụ na -atụ aro iji mmanụ CBD, ntụ ntụ, na ịgba ọgwụ maka ndị ọrịa na -ata ahụhụ site na mfu akwara na spasms n'ihi MS.
Ọmụmụ ihe ọzọ emere iji mụọ nsonaazụ CBD na ndị ọrịa Alzheimers egosikwala nsonaazụ na -ekwe nkwa, yabụ na -egosi na CBD nwere akụrụngwa neuroprotective. Ka ọ dị ugbu a, ọrịa Alzheimer bụ ọrịa neurodegenerative na-enweghị ike ịgwọ, nke dị ugbu a, enweghị ike belata ngwa ngwa ma ọ bụ tụgharịa ma ọlị. Agbanyeghị, in vitro mmetụta nke CBD na sel ụbụrụ na -egosi onyonyo ọhụrụ ma na -enye olileanya ndị ọrịa na -arịa Alzheimer.
N'ịzụlite echiche a nke etinyere na mmetụta vitamin in vitro, a na -eme nyocha n'ụdị anụmanụ iji hụ ma enwere ike weghachite Alzheimer na ọgwụgwọ ike na CBD. Ụmụ oke nwere ntụpọ nke ọgụgụ isi na gliosis, ụdị akpụpụta ụbụrụ n'ụbụrụ, n'ihi Alzheimer nyere CBD dịka akụkụ nke ọmụmụ a. Achọpụtara na CBD belatara nhazi ụbụrụ n'ụbụrụ ma bute neurogenesis ma ọ bụ mmepe nke mkpụrụ ndụ ụbụrụ ọhụrụ iji lụso mfu nke mkpụrụ ndụ n'ihi gliosis na -emegharị emegharị. Ọzọkwa, achọpụtara CBD ka ọ gbanwee mmegharị echiche nke a na -ahụ na ụdị oke, yabụ na -enye olileanya na Alzheimer nwere ike ịlaghachi azụ na ọgwụgwọ, n'ọdịnihu.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọtụtụ n'ime nsonaazụ ndị a ka emepụtara n'ụdị anụmanụ, a ga -ejikọkwa nsonaazụ ndị a na nnwale ụlọ ọgwụ na isiokwu mmadụ tupu ojiji CBD nwere ike bụrụ ụkpụrụ nlekọta.
Njikwa ihe otutu na ọgwụgwọ
CBD enwetawo traction n'ihi analgesic, anxiolytic na mgbochi mkpali ya. Ọ bụ ihe mgbochi mkpali nke cannabinoid a mere ka ejiri ya mee ihe dịka ọgwụgwọ mgbochi ọnya. Ekwenyere na ihe otutu na -ebute mbufụt, nje bacteria, na mmepụta sebum gabigara ókè. N'ime ọmụmụ emere iji nyochaa akụrụngwa nke mmanụ CBD, achọpụtara na CBD na-egbochi mbufụt na ya mere mmepe nke cystic, ọnya mkpali site na igbochi nzuzo nke cytokines pro-acne inflammatory na akpụkpọ ahụ. Ọzọkwa, ọmụmụ a chọpụtara na CBD nwere ike ịgbanwe ọkwa sebum na akpụkpọ ahụ site na ichepụta mmepụta ya na ibelata ya, ozugbo.
A na-eji CBD ugbu a n'ọtụtụ ngwaahịa nlekọta anụ ahụ na ndị na-ahụ maka mpaghara nke a na-akpọsa dị ka ngwaahịa mgbochi ọnya. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịchọta ngwaahịa nwere ụdị teknụzụ iji nyere ngwaahịa ahụ aka itinye ya na akpụkpọ ahụ mmadụ. Nke a bụ iji hụ na ọ bara n'ime akpụkpọ ahụ wee belata nsị n'ime.
Ties Njirimara ọgwụ mgbochi mmụọ
A na -eji CBD n'ọtụtụ ebe maka ike ya ijikwa nsogbu ọrịa neuropsychiatric, ọ bụ ya mere a na -eji eme ụdị nyocha dị iche iche na nsonaazụ CBD ndị ọzọ nwere ike ime. Ọtụtụ n'ime ọmụmụ ihe ndị ahụ egosipụtakwa nzaghachi dị mma.
Ekwenyere na iji mmanya eme ihe ugbu a na-ebute mmepe nke schizophrenia, ọrịa akwara ozi na-adịghị ala ala nke nwere psychosis-dị ka ihe mgbaàmà. Ọmụmụ ihe ọhụrụ ekwuola na iji CBD nwere ike ịba uru n'ịchịkwa na imegide psychosis a na -ahụ na schizophrenia, nke na -etolite n'ihi ị cannabisụ mmanya cannabis, yana nke na -etolite n'ihi mmetụta nke mkpụrụ ndụ ihe nketa, na -enweghị ntinye cannabis. Ọ nwekwara ike tụgharịa psychosis nke a na -ahụkarị na nnukwu nchịkwa nke THC.
Nsonaazụ ndị a na -egosi na CBD nwere ihe na -egbochi mmụọ nke kwesịrị ka enyochakwuo ya n'ihi na uru ndị a nwere ike ịba nnukwu uru na ọgwụ.
♦ Ọgwụgwọ na Nlekọta Nsogbu Mmebi Ihe
A na -etolite ọrịa riri ahụ n'ihi nsonaazụ ọgwụ na mpaghara neuronal, na -eme ka ndị mmadụ nwee agụụ ma dabere na ọgwụ ndị a. N'ime nyocha akwụkwọ nke ndị nyocha mere iji tụọ ojiji nke CBD dị ka ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ ọrịa riri ahụ, achọpụtara na CBD nwere ike nwee ike isoro sekit neuronal ndị a wee gbochie ha, na -ebute agụụ na ịdabere na ngwaahịa ndị a.
Ntụle akwụkwọ ahụ gụnyere ọmụmụ 14, nke emere 9 n'ime ụdị anụmanụ, ọkachasị oke. Achọpụtara na CBD bara uru karịsịa megide opioids, cocaine, psychostimulant, sịga, na riri ahụ cannabis. Agbanyeghị, ndị ahụ bụ nsonaazụ mbido ma enwebeghị mbipụta ọzọ tupu nsonaazụ a anabata ọtụtụ mmadụ.
♦ Mgbochi ọrịa shuga
Ọrịa shuga bụ nnukwu nsogbu na -emetụta oke akụkụ nke ndị bi n'ụwa. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya banyere ụdị anụmanụ chọpụtara na iji CBD na ụmụ oke oke oke nwere ike belata ọrịa shuga. N'ime ọmụmụ ihe a, n'etiti ndị na -etinye aka na ndị otu placebo, enwere oke mbelata ọrịa ọrịa shuga site na pasent 86 ruo pasent 30.
Ọzọkwa, ọmụmụ a chọpụtara na iji CBD nwere ike bute mbelata ọrịa shuga n'ihi nsonaazụ mgbochi mkpali na mmetụta immunomodulatory nke cannabinoid. Iji CBD n'ụdị anụmanụ ndị a rụpụtakwara na -egbu oge ịmalite insulitis na -ebibi ihe, otu n'ime isi ihe kpatara mbelata insulin na ọrịa shuga.
CBD bụ ogige dị ebe niile nke dịkwa n'ụdị dị iche iche iji mee ka usoro ngwa niile dị mfe maka ndị ọrụ. Ụzọ ndị a na -ejikarị etinye ma ọ bụ jiri CBD gụnyere, mana ọnweghị oke:
Ude mmiri mmanụ CBD
Ndị nnọchi anya mpaghara a nwere CBD ma ejiri ya maka njikwa mgbu, mbufụt, ọzịza, mgbakasị anụ ahụ na ọbụna ihe otutu. Ekwesịrị iji ude elu CBD dị ka ngwaahịa nlekọta anụ ahụ ọ bụla ma tinye ya n'akụkụ akpụkpọ ahụ chọrọ ọgwụgwọ.
Mgbe ị na -azụta ihe ọkụkụ na ude CBD, ọ dị mkpa ịzụta ngwaahịa nke nwere ụdị nanotechnology ma ọ bụ micellization nke na -enye ohere ka ihe ndị na -ahụ maka mpaghara, dị ka CBD, nwee akpụkpọ ahụ wee gwọọ ya n'ime. Na-enweghị usoro nnabata ndị a, ndị na-ahụ maka ihe nwere CBD ga-anọ n'elu ma ghara inwe mmetụta bara uru ọ bụla.
V Mmanụ CBD
CBD mgbe a na -eku ume site na vap na -enye ohere ka CBD banye n'ime ahụ ngwa ngwa, wee mepụta uru karịa ụdị ọ bụla ọzọ. Ebe ọ bụ na a na-ekuru ya na ngụgụ wee gafere n'ọbara, CBD na vape na-agabiga metabolism mbụ nke na-ewekarị ogologo oge ma gbochie ime ngwa ngwa nke CBD. Ọ bụghị otu a ka ọ dị na vapes CBD na usoro ojiji CBD a ma ama n'etiti ndị na -eto eto. Ọ bụ ezie na CBD nwere usoro ngwa ngwa mgbe ejiri ya n'ụdị vape, ọ nwekwara metabolism ngwa ngwa yana ọ bụ naanị n'ọbara ihe dị ka nkeji iri, nke pụtara na nrụpụta dum nke vapes CBD na -adị nkeji iri.
Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na vapes abụghị ụzọ dị mma iji jiri CBD ma ọ bụ ụdị ngwaahịa ọ bụla ọzọ. A na -ahụta vaping ka ahụ ike karịa ị smokingụ sịga mana ọ ka na -adịghị mma yana ekwesịrị izere ya, ọkachasị ebe ụdị CBD ndị ọzọ dị na ịnweta.
CBD capsules na mbadamba
Ụdị CBD a bụ ụdị nchịkwa CBD kachasị achịkwa ma na -enye ndị ọrụ ohere iri cannabidiol n'ụdị ọgwụ dị iche iche, dabere na mmasị na mkpa ha. Usoro ọgwụgwọ maka capsules na mbadamba CBD dị n'etiti 5 mg na 25 mg.
Con CBD Na -etinye uche
CBD na -etinye uche, dị ka aha ya na -egosi, nwere ụdị mkpokọta CBD. Ná nkezi, ngwaahịa ndị a na -abịa na onye na -arịọ arịrịọ ma na -etinyekarị otu narị ugboro karịa ngwaahịa na ụdị CBD ndị ọzọ. Dị n'ụdị ntụ ntụ, ekwesịrị idobe ngwaahịa a n'ọnụ ruo nwa oge tupu ilo ya ka CBD nwee ike banye n'ime ya yana site na metabolism mbụ gafere ya.
Mmanụ CBD na tinctures
Mmanụ CBD na tinctures nwekwara nnukwu mkpokọta CBD na -abụkarị site na 100 mg ruo 1500 mg. Ebe ndị a na -erikwa ọnụ, ọ dị mkpa ịlele usoro onunu ogwu ma zere ịdoụbiga mmanya ókè n'ihi na nke ahụ nwere ike ịbawanye ohere nke mmetụta ọjọọ ma belata mmetụta bara uru nke CBD.
Ụdị CBD a bụ ụdị ngwa ọhụrụ, ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ, nwere mkpokọta CBD kacha ala. Ọdịnaya nke CBD na sprays ndị a sitere na 1 mg ruo 3 mg kwa otu ịgba.
Mmetụta dị n'akụkụ CBD
CBD bụ ngwaahịa ama ama nke ndị na-eto eto na ndị agadi na-ejikarị eme ihe. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ntụ ntụ cannabidiol nwere ọtụtụ uru sayensị gosipụtara na ya, ọ dị mkpa iburu n'uche na site na uru ndị a, enwere mmetụta ole na ole metụtara CBD. A na -ahụ mmetụta ndị a mgbe a na -ewere CBD ọnụ, ma ọ bụ n'ọnụ. Emebeghị nyocha zuru oke iji mara mmetụta ndị nwere ike ibilite n'ụdị ngwa dị iche iche.
Mmetụta ndị na -emetụtakarị CBD gụnyere:
Ọbara mgbali elu ma ọ bụ hypotension
Ọnụ akọrọ ma ọ bụ Xerostomia
Imirikiti mmetụta ndị a adịghị njọ ma ga -edozi ya n'amaghị ama. Enwere ike iji ngwaahịa CBD ruo izu iri na atọ na -aga n'ihu, yana usoro nchekwa dị mma nke 13mg kwa ụbọchị, a na -ejikọ Epidiolex na nnukwu mmerụ ahụ imeju ma ọ bụrụ na ewere ya na usoro onunu ogwu ka akwadoro ka a na -eji ya n'ọdịdị dị elu karịa 200mg kwa ụbọchị. , n'agbanyeghị na ọ bụ ihe mgbagwoju anya na -adịghị ahụkebe.
Mmekọrịta enwere ike na ịkpachara anya pụrụ iche nke CBD
A na-ahụkarị CBD ka ọtụtụ ndị okenye na ndị okenye na-anabata ya nke ọma ma nwee ike rụpụta nnukwu uru na ndị a. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere mkpachapụ anya pụrụ iche nke ekwesịrị ka ewere maka ụfọdụ ndị nwere ike nwee mmasị ị were CBD. Nchedo ndị a bụ maka ndị mmadụ na -arịa ọrịa imeju ma ọ bụ ọrịa Parkinson. Ọnọdụ ndị a na -agbanwe nrụpụta nke ngwaahịa CBD na ndị ọrịa a kwesịrị ilekọta anya pụrụ iche ma ọ bụrụ na ha ahọrọ iwere CBD.
Ndị ọrịa nwere ọrịa imeju ka nwere ike were CBD, agbanyeghị, a ga -achọ ka ha were obere ọgwụ CBD, karịa mmadụ nkịtị ka imeju ha enweghị ike ịgbari ngwaahịa dị ka ọ na -adịbu. Nnyocha na -egosi na ọkwa CBD dị ala anaghị emetụta ma ọ bụ tinye nrụgide na imeju na -arịa ọrịa, nke pụtara na ndị ọrịa a nwere ike were ngwaahịa CBD n'enweghị nsogbu.
Ndị ọrịa na -arịa ọrịa Parkinson nwere ihe mgbaàmà nke ịma jijiji nke izu ike na mmegharị akwara adịghị mma. A na -ekwenye na mgbaàmà ndị a na -ekwubiga okwu ókè site n'iji CBD ngwaahịa, ọ bụ ya mere achọrọ ndị ọrịa Parkinson ka ha ghara iji nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị a.
A naghị atụ aro ngwaahịa CBD maka ụmụaka, n'agbanyeghị na amabeghị mmetụta ọ ga -enwe na ọgbọ a. Epidiolex, ọgwụ a na -eji maka njikwa na ọgwụgwọ ọdịdọ, bụ nke a na -enyekarị ụmụaka na -arịa ọrịa ọdịdọ a. Dabere na FDA, ọgwụ a dị mma iji ụmụaka mana amabeghị ma ọ bụrụ na ọ dị CBD ngwaahịa dị mma ma ọ bụ dị irè na ụmụaka. Ruo mgbe emere nyocha ọzọ, ọ kacha mma izere ịnye ụmụaka ngwaahịa CBD na -abụghị Epidiolex.
A gwakwara ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị dị ime ka ha kpachara anya ma zere iji ngwaahịa CBD. Agbanyeghị, nke a esiteghị na mmetụta nke CBD, nke amabeghị, mana n'ihi na enwere ike bute ngwaahịa ndị a site na nsị ma ọ bụ ihe na -emerụ ahụ nke nwere ike imerụ nwanyị ahụ ma ọ bụ nwa na -eto eto. Ebe ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume ka mmadụ niile hụ nchekwa nke ngwaahịa ha na -eji, ọ kacha mma izere ngwaahịa CBD n'ozuzu ya n'oge a.
Ewezuga ịkpachara anya ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ọ nweghị ihe a maara gbasara mmekọrịta ọgwụ ọjọọ enwere ike na CBD.
Ụdị dị a Productsaa ka ngwaahịa CBD mepụtara na AASraw?
AASraw bụ ebe a pụrụ ịdabere na ya nke ntụ ntụ steroid, homonụ nwoke na nwanyị, yana ọgwụ ndị mara mma. AASraw bụkwa onye nrụpụta na onye na-ebubata CBD, na-ewepụta ngwaahịa dị elu, dị mma iji, yana ngwaahịa CBD dị mma. CBD bụ ngwaahịa mepere emepe dị n'ụdị dị iche iche mana ọ bụghị ndị nrụpụta niile na -emepụta ma na -emepụta ụdị CBD niile. Ụlọ ọrụ CBD nwere ike rụpụta ụdị ngwaahịa dị iche iche, ọ bụghị ụdị niile ka ha nwee ike lekwasị anya na ịdị mma na nchekwa nke ngwaahịa a.
AASraw bụ onye nrụpụta ntụ ntụ CBD yana ọ na -arụkwa CBD mmanụ, ha abụọ bụ ndị a ma ama nke ukwuu na ihe a na-achọsi ike. Ngwaahịa nke AASraw rụpụtara gụnyere:
→ CBD ntụ ntụ
CBD ntụ ntụ ma ọ bụ itinye uche bụ ụdị cannabidiol nke emepụtara ma ree ya ọtụtụ ndị na -agbalị zụta CBD ntụ ntụ dịka ọ dị mfe iji ma rụọ ọrụ nke ọma n'ịmepụta nsonaazụ. AASraw nwere otu ụdị ntụ ntụ CBD dị maka ọrịre, nke a na -emepụta na ụlọ ọrụ ebe a na -agbaso ntuziaka nchekwa yana usoro yana ezigbo nkọwa. Nke a na -ahụ maka nchekwa na arụmọrụ nke ngwaahịa, nke AASraw, onye na -emepụta ntụ ntụ CBD na onye na -eweta ntụ ntụ CBD, na -ekwe nkwa ma na -anya isi.
Onye na -emepụta ntụ ntụ CBD na -ahụkwa na ngwaahịa ndị ahụ enweghị nsị ma ọ bụ ihe ọ bụla na -emerụ ahụ n'oge nrụpụta ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ CBD. Ọzọkwa, AASraw nwere njikwa njiri mara mma na n'ọnọdụ adịghị ahụkebe nke nsogbu dị mma, na -enyere aka soro ma cheta ngwaahịa niile arụpụtara na otu ahụ.
A na-akpọ ntụ ntụ CBD nke AASraw rụpụtara dị ka CBD Powder mmiri nwere mmiri wee bụrụ ntụ ntụ na-acha ọcha nke nwere pasent 10 CBD. Ngwaahịa a enweghị THC na pasent 90 ọzọ nke ntụ ntụ nwere ihe mejupụtara ọgwụ na ihe mgbochi na -enyere aka ịbubiga uru bara uru nke CBD ma kwe ka ngwaahịa ahụ nọrọ ọnụ wee nọrọ ogologo oge.
A ga-agwakọta ntụ ntụ CBD nke mmiri na-agbaze na mmiri iji mepụta mmiri mmiri mgbe ọ dị mkpa ka ewere ya. Ekwesịrị ịgwakọta mmiri mmiri nke ọma wee maa jijiji nke ukwuu, nke nwere ike ime ka ihe ngwọta ahụ bụrụ ụfụfụ. Nke ahụ bụ udidi nke ngwaahịa a, ọ bụ otu a ka ekwesịrị isi were ya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ekwesịrị ịchekwa ntụ ntụ CBD n'ụzọ kwesịrị ekwesị, pụọ na ìhè anyanwụ. Ọzọkwa, ọ nweghị ebe ntụ ntụ ga -akpọtụrụ acid ma ọ bụ ntọala n'ihi na nke ahụ nwere ike meghachi omume na ntụ.
Mmanụ CBD, dị ka m kwuru n'elu, bụ ụdị CBD nwere ike n'ihi na ha nwere nnukwu ihe CBD atụnyere ụdị ndị ọzọ. A na -emepụta mmanụ CBD nke AASraw na Ezi Mmepụta Mmepụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ GMP gbaara ezi ama, na -ekwe nkwa ike na ịdịmma nke mmanụ CBD. A na -emepụta mmanụ CBD niile na ngwaahịa ndị ọzọ nke AASraw rụpụtara iji hụ na enweghị mmetọ na ngwaahịa ha nakwa na ha nwere oke ike dịka o kwere mee.
Enwere ụdị mmanụ CBD abụọ dị iche iche nke AASraw rụpụtara, dị ka ekwuru n'okpuru:
· Hemp mmanụ dị mkpa
Mmanụ CBD Hemp na -enweta ewu ewu maka ọtụtụ uru ngwaahịa ndị a, dị ka ekwuru n'elu. Mmanụ kacha ama ama karịa ụdị ngwaahịa CBD ndị ọzọ n'ihi na ha nwere mkpokọta CBD dịtụ elu.
Hemp mmanụ dị mkpa site AASraw bụ mmanụ viscous, ojii, na odo odo nke lebara anya nke ukwuu ma kwụsie ike. Ekwesịrị ịchekwa ya na oke ụlọ yana anya ọkụ anyanwụ iji hụ uru kacha elu yana ogologo ndụ ngwaahịa a. Ngwaahịa a nke ụlọ ọrụ CBD nke AASraw bụ nke a nwalere nke atọ ma dị na mkpokọta dị iche iche, yana CBD ma ọ bụ cannabinoids na-enweghị isi.
Ngwaahịa a bụ halal, Kosher, yana THC kpamkpam mana o juputara na cannabinoids na-anaghị emetụta mmụọ nke osisi hemp.
· Mmanụ Hemp ọlaedo
Golden Hemp Mmanụ nke AASraw bụ onye anwale nke atọ, ezigbo mmanụ cannabinoid bara ụba na cannabinoids zuru oke. A na-ere mmanụ a na-acha odo odo na mmanụ na-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara na nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, ọ ga-ekwe omume ịzụta nke a ozugbo na ụlọ ọrụ CBD nke AASraw ọkachasị ma ọ bụrụ na achọrọ CBD dị elu na mmanụ.
Ngwaahịa na -abịa na ntinye pụrụiche na nchekwa n'ihi na nchekwa na -ezighi ezi nwere ike mee ka ngwaahịa ahụ ghara ịdị ike. Ọ dịkwa mkpa ịmara na cannabinoids dị na ngwaahịa a nwere ike kristal ka oge na -aga. Nke a apụtaghị na ngwaahịa anaghịzi arụ ọrụ kama na ọ bụ naanị ịkwanye mmanụ site na itinye ya na mmiri ịsa ahụ ga -agbaze kristal, na -enye ohere iji mmanụ ahụ dị ka ọ dị na mbụ.
Kedu otu esi ahọrọ ezigbo onye nrụpụta ngwaahịa CBD?
Ọtụtụ ndị na-emepụta ntụ ntụ CBD na-ekwe nkwa na ngwaahịa ha nwere ezigbo CBD dị elu mana nke ahụ anaghị adịkarị n'eziokwu. Ọ dị mkpa ịzụta ntụ ntụ CBD n'aka ndị na -ere ahịa ekwenyero nke na -agbaso ntuziaka nchekwa yana nwee ebe nlele dị mma iji hụ na nchekwa, arụmọrụ yana ike nke ngwaahịa a.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịzụta ntụ ntụ CBD n'aka ndị nrụpụta na -enye ngwaahịa nke ọ bụghị naanị onye nrụpụta ntụ ntụ CBD na onye na -eweta ya na -anwale ya kamakwa ndị ọzọ nke na -ahụta ịdị mma nke ngwaahịa ikpeazụ tupu ezipụ ya n'ahịa. ojiji nke ndị ahịa dị iche iche. Ọ bụrụ na ngwaahịa ada ada ule ụlọ nyocha nke atọ a, ọ ga-enwerịrị iwe maka onye nrụpụta nke ga-enyocha ihe kpatara ngwaahịa ahụ ji daa nlele dị mma yana ọ ga-edozi nsogbu ndị ahụ tupu imepụta ngwaahịa ọhụrụ na ịnye ha.
Karịsịa mgbe ị na -azụta CBD n'ahịa ma ọ bụ na -etinye iwu ntụ ntụ CBD, ọ dị mkpa inyocha ngwaahịa na onye nrụpụta nke ọma iji zere nsogbu ọ bụla na ngwaahịa ikpeazụ dị na njupụta. Ọ bụrụ na achọrọ nnukwu uru nke CBD, a ga -achọ nyocha ọzọ n'ime onye nrụpụta iji hụ na ngwaahịa otu ịzụrụ bara ọgaranya na CBD, yana CBD naanị. Ngwaahịa ahụ ekwesịghị ịnwe THC ma ọ bụ cannabinoids ndị ọzọ na -ebelata mmetụta nke CBD ma ọ bụ gbochie ya ịrụ ọrụ zuru oke.
 Lucas CJ, Galettis P, Schneider J (Nọvemba 2018). "Ọgwụ pharmacokinetics na pharmacodynamics nke cannabinoids". Akwụkwọ akụkọ British Journal of Clinical Pharmacology. 84 (11): 2477–2482. ma ọ bụ: 10.1111 / bcp.13710. PMC 6177698. PMID 30001569.
 Zhang M. "Mba, CBD abughi 'iwu na obodo iri ise niile'". Niile. Weghachite November 50, 27.
 Klein C, Karanges E, Spiro A, Wong A, Spencer J, Huynh T, et al. Ndị ọzọ (Nọvemba 2011). "Cannabidiol nwere ikike Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) mmetụta omume ma gbanwee THC pharmacokinetics n'oge nnukwu na-adịghị ala ala ọgwụgwọ na-eto eto oke". Ọrịa. 218 (2): 443–57. ma ọ bụ: 10.1007 / s00213-011-2342-0. PMID 21667074. S2CID 6240926.
 Adams R, Hunt M, Clark JH (1940). "Nhazi nke cannabidiol, ngwaahịa dịpụrụ adịpụ na wii wii wepụ nke Minnesota ọhịa hemp". Akwụkwọ akụkọ nke American Chemical Society. 62 (1): 196–200. ma ọ bụ: 10.1021 / ja01858a058. ISSN 0002-7863.
 Gaoni Y, Mechoulam R (1966). "Hashish-VII isomerization nke cannabidiol ka tetrahydrocannabinols". Tetrahedron. 22 (4): 1481–1488. ma ọ bụ: 10.1016 / S0040-4020 (01) 99446-3
 Abernethy A, Schiller L (July 17, 2019). "A na-enyefe FDA na ,da, Science Science na CBD". Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na US (FDA). Weghachite October 17, 2019.
 Gunn L, Haigh L (Jenụwarị 29, 2019). "Ndị ọrụ nchekwa Britain lere CBD anya dị ka nri akwụkwọ, na-achọ igbochi ire ere na ahịa UK". Nutrition Insight, CNS Media BV. Edebere site na mbụ na February 2, 2019. Weghachite Jenụwarị 1, 2019.
 Arnold M (July 30, 2019). "Sweden Soro Intali Na Pzọ Iji Kọwaa Iwu Mmanụ CBD". Akwụkwọ akụkọ Cannabis Industry. Weghachite na September 3, 2020.
 "Cannabinoids, nyochare na EU Novel katalọgụ (v.1.1)". Kọmịshọn European. Jenụwarị 1, 2019. Weghachite February 1, 2019.
 Todorova S. "cannabiskọ mmanya na Bulgaria: Iwu kwadoro mana akatọla ya". Mmekọahụ. Weghachite na September 3, 2020.
 Ngalaba Nlekọta Ahụike Ọgwụ nke Ọstrelia (Eprel 24, 2020). "Ndụmọdụ: Ntugharị mmegharị na Poisons Standard - Nzukọ ACMS / ACCS Joint, June 2020". Nchịkwa Ngwaahịa ọgwụgwọ (TGA). Weghachite na November 25, 2020.
 "Akwụkwọ ozi ịdọ aka na ntị na nsonaazụ nnwale maka ngwaahịa ndị metụtara Cannabidiol". Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na US (FDA). November 2, 2017. Weghachite Jenụwarị 2, 2018.
 Kogan L, Hellyer P, Downing R (2020). "Mwepụ Hemp Mmanụ iji Na-agwọ Ọrịa Osteoarthritis metụtara Canine: Ọmụmụ Ihe Pilot". Akwụkwọ akụkọ nke American Holistic Veterinary Medical Association. 58: 35–45.